Kulamadii Dhexmaray Jendayi Frazer iyo Madaxda Siyaasadda Somaliland iyo Nuxurkii arimaha ay ka hadleen | WWW.SOMALILAND.NO
Kulamadii Dhexmaray Jendayi Frazer iyo Madaxda Siyaasadda Somaliland iyo Nuxurkii arimaha ay ka hadleen
Jenday Frazer oo codsatay inay kulan gaara la yeelato Hogaamiyayaasha Ururka Qaran.
Axmed Silaanyo,oo ka hadlay kulankii dhexmaray Jenday Frazer.
Hargeysa (somaliland.no..3Feb.2008.)- Kaaliyaha Xoghayaha Arrimaha Dibadda Maraykanka u qaabilsan Afrika Ms. Jendayi Frazer socdaal Maalin ah ku timi Magaalada Hargeysa, ayaa kulamo kala duwan la yeelatay Madaxweyne Rayaale, hoggaamiyeyaasha saddexda xisbi qaran ee UCID, UDUB iyo KULMIYE iyo masuuliyiinta sare ee urur-siyaasadeedka QARAN,intii aanay ka ambabixin halkaasi.
Kulamadan oo ka dhacay hoteelka Ambassador ee magaalada Hargeysa, ayaa waxyaabihii lagaga wadahadlay waxaannu ka warraysanay xubno ka mid ah masuuliyiinta siyaasadeed ee ka qaybgalay.
Masuuliyiinta saddexda xisbi ee UDUB, UCID iyo KULMIYE oo si wadajir ah ula kulmay Ms. Jendayi Frazer, ayaa haddana waxa uu masuul kastaa gaarkiisa ugu gudbiyey warbixin guud oo ku saabsan xaaladda dalka iyo farriimaha uu ku iftiiminayo aragtidiisa siyaasadeed ee Somaliland, iyada oo intaa kadibna Kaaliyaha Xoghayaha Arrimaha Dibadda Maraykanka ee Afrika kulan gaar ah oo aan cid kale ku wehelin la yeelatay hoggaamiyeyaasha urur-siyaasadeedka QARAN.
Ugu horreyn Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee KULMIYE Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) oo hoggaaminayey xubnaha xisbigiisa uga qaybgalay kulankaas oo aannu weydiinay arrimaha ay kala hadleen Jendayi Frazer, waxa uu yidhi; “Saddexda xisbi qaranba marbay la wada kulmeen Jendayi Frazer kuligayana aad baanu ugu soo dhawaynay dalka, in ay qaranka Somaliland oo dhanna imitaatinkeedu farxad weyn u tahay ayaanu u sheegnay iyaga oo ka socda dawladda maanta ugu weyn dunidana inay daneyaan qaddiyaddana waa mid qiimo weyn ugu fadhida qaranka, dadka iyo qaddiyaddii aannu lahaynba, waxaanuna ka wadahadalnay oo u caddaynay in arrimaha markay timaad qaddiyadda iyo goonni-isu-taagga Somaliland aanay jirin wax habayaraatee aynu ku kala duwanahay, balse arrintaas tahay mid qaran oo aannu ka wada midaysanahay dawlad, asxaab iyo shacaba oo mawqifkayagu mid ka yahay.
Waxa kale oo aannu kala hadlaynay sidaannu u aragno ama baahida loo qabo Somaliland inay gacan iyo taageero gaystaan iyo werweridda aannu ka qabno geeddi-socodka dimuqraadiyadda Somaliland.
Haddii anigu aan ka hadlo xisbi ahaan dareenka aannu muujinaynay oo aannu welwel iyo dareenka qabno in geeddi-socodka dimuqraadiyaddu jecelnahay in iyaguna arrimahaa gacan naga siiyaan, hadday tahay xagga doorashooyinka iyo xagga guubaabada intaba arrimahaas ayaanu runtii kala hadalnay.
Midda kale waannu warsanay oo xisbi ahaan iyo golayaal ahaanba wararka guud ee jariidaddu qorayeen mooyaan Madaxweynuhu safarkii dhawaa ee uu tegay Maraykanka noogamuu warramin, warar kala duduwana way soo baxayeen, markaa waxaannu ku nidhi, bal nooga warran safarkii uu Madaxweynuhu dalkiina ku yimi iyo wixii aad ka wadahadasheen, runtiina Jendaye Frazer si faahfaahsan oo wanaagsan ayey u hadashay. Waxay muujisay in ay danaynayaan arrimaha Somaliland oo markay aqoonsiga timaad tahay mid u taal Midowga Afrika, laakiin wixii iyaga dareenkooda ah ee ay taageero ka geysan karayaan, hadday tahay xagga horumarinta ama taageerada dimuqraadiyadda oo ay aad ugu dheeraatay culays weyna ay saartay oo ay tidhi, waxa qudha ee aan ku nabadgali kartaan dalkuna ku nabad gali karaa gacana aannu ka gaysan karnaa diyaarna aannu u nahay waa geeddi-socodka dimuraadiyadda inay doorashooyinku waqtigoodii dhacaan oo si habboon u dhacaan, arrimahaas ayaanay ka hadashay, runtiina yididiilo badan ayaa hadalkeedu na geliyey, hadday tahay taaageerada ay qaranka diyaarka ula tahay iyo sida dalkeenu ku nabadgalayo ee ay culayska u saartay.”
Guddoomiyaha oo la waydiiyey waxay Jendayi Frazer ku macnaysay imaatinkeeda Somaliland waxa uu yidhi; “Waxay ku macnaysay in ay dalka timaado oo muujiso in ay innala jiraan oo wixii ay innala qaban karaan innala qabtaan inay diyaar u yihiin in xagga dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka dhaqaale ka gaystaan. Markaa runtii imaatinkeeda halkan [Somaliland] oo qudha ayaaba macno weyn ugu fadhiya dalka.”
Waxaannu uu Md. Siilaanyo xusay in aanay Kaaliyaha Xoghayaha Arrimaha Dibedda Maraykanku aanay haba yaratee kala hadal wax ku saabsan Soomaaliya oo uu wada hadalkoodu ku galaysnaa Somaliland oo qudha.
Urur-siyaasadeedka QARAN waxa ay Jendayi Frazer dalbatay in ay kulan gaar ah la yeelato hoggaanka urur-siyaasadeed qaranka oo sharciyadiisa khilaaf ka taagan yahay.
Haddaba, Guddoomiyaha ururka QARAN Dr. Maxamed Cabdi Gabboose oo kulankaa kadib saxaafaddu wax ka waydiiyeen arrimihii ay ay ka wadahadleen Kaaliyaha Xoghayaha Arrimaha Dibedda Maraykanka.
Dr. Gabboose oo arrimahaa faahfaahinayeyna waxa uu yidhi; “Safarkoodani waxa uu muujinayaa calaamd yididiilo leh, Somaliland oo 17 sanno waday dadaal dheeraada ayaa laga yaabaa in midhahoodii ay hadda gurtaan. Waxaannu kala hadalnay in ay dadka reer Somaliland yihiin dad mutaystay inay xushmadooda, karamaadooda iyo ictiraafkoodaba caalamka ka helaan. Waxaan kaloo kala hadalnay dimuraadiyadda iyo ictiraafka Somaliland meel maamul wanaagsan, ismaqal wanaagsan iyo isku dul qaad leh.
Runtii cidna iska dhego tirimayso dawladda Maraykankuna waa dal weyn waxayna ku gaadhay waynaanta Illaahay ka sakow, waxay samaysteen nidaam iyo sharci ah inay shuruucdooda xurmeeyaan oo isku dulqaataan inay hay’ado kala saara dhistaan oo waxaas oo dhammi maalinba maalinta ka dambaysa koraan oo sidaa ay dalweyn ku noqdaan, waxaannu kala hadalnay sidii ay hay’adaha dimuqraadiyadda ee isdheelitir nooga dhisi laahaayeen, kuwaas oo aannu aaminsanahay in wax badani ka maqan yihiin, waxaannu ku mahadnaynaa masuuliyiintaa sarsare ee Maraykanka iyagaa soo codsaday ururka QARAN in ay la kulmaan, xukuumaddeenuna ma dalban, annaguna maanu dalban ee iyagaa soo codsaday.
Codsigoodaa laftigiisa ayaa noo ahaa rajo wanaagsan, qiimayn wanaagsan iyo qadarin wanaagsan, markaa annaguna waxaannu kala hadalnay uun wax aannu wax ku raadinaynaa in ay tahay dariiq nabadad, dariiqa dimuqraadiyadda, dariiqa shuruucda dalka u yaal in aannu aaminsanahay saddexdaa xisbi ee monoboliga ah ee ku meel-gaadhka ah in aanay ahayn dariiqa ummaddu ku gaadhi karto hoggaanka wanaagsan, markaa arrintaasaanu si fiican uga hadalnay, waxaanan dadka kale uga duwanayn annagu waannu soo diyaargarownay oo shalay baa [dorraad] naloo sii sheegay, markaa wax allaale wixii ay na odhan lahaayeen waxaannu ugu sheegnay oo ugu gudbinay qoraal, iyaga oo aad ugu faraxsan oo dhegaystay si qalbiga, wajiga iyo dheguhu furan yihiin ayaanu soo kala tagnay.
Ictiraafkeena ayeyna soo dedejinaysaa distoorka iyo hannaanka dimuqraadiyadda oo la ilaaliyaa, markaa arrintaydu inay xaasaasi tahay waxaad ku qiyaasi kartaa keligayo ayey nala kulmeen oo na qiimeeyeen,” ayuu yidhi Dr. Maxamed Cabdi Gabboose.
Sida oo kale Md. Maxamed Cabdi Faarax (Ina Cabdi Malaw) oo ka mid ah golaha dhexe ee xisbiga talada dalka haya ee UDUB oo ka qaybgalay kulanka ay shalay madaxda axsaabta qaranku la yeesheen Ms. Jendayi Frazer oo saxaafaddu wax ka waydiisay waxyaabihii ay kala hadleen Kaaliyaha Xoghayaha Arrimaha Dibedda Maraykanka ayaa yidhi; “Saddexda xisbiba wadajir bay ula kulmeen Jendayi, waxayna u muujiyeen aragti wadajir ah oo ah in aynu hirgelino dimuqraadiyadda iyo in la qabto doorashooyinka iyada oo la samaynayo diiwaangelinta, ictiraaf-raadinta Somaliland aannu u midaysan haya, intaasaanu ka wada hadalnay si fiicanna waannu isku fahanay, runtiina marka heerka qarannimada laga wada hadlayo mawqifka asxaabtu waa isku wada mid, afkaarta muwaadiniinta waa isku wada mid. Markaa fikir midaysan oo qurux badan ayaanuu halkaa ka dhibanay annaga iyo asxaabta kaleba, waxayna noo sheegtay in ay ku faraxsan yihiin dimuqraadiyadda, nabadgalyada iyo hannaanka dawladnimo ee ka jirta Somaliland, hadday tahay isku duubnaan iyo mujtamac meel u wada jeeda oo isku mawqif ah, oo nabadgalyada Geeska Afrikana xasillooni ahaan qayb weyn kaga jira, wax allaale wixii aynu dimuqraadiyaddeenu ku hirgalinaynana inay gacan innaga siinayaan ayey noo sheegtay.”
Sidaa si la mid ah xisbiga xisbiga mucaaradka ah ee UCD,ayaa isaguna qayb ka ahaa kulamadii weftiga ay hoggaaminaysay Jendayi Frazer la yeelatay masuuliyiinta kala duwan ee Somaliland.
Jendayi Frazer,ayaa Kulankii ay la yeelatay Md.Rayaale oo ku weheliyay M/weyne ku xigeenka iyo xubno wasiiradiisa ka mid ah ayaa ahaa mid albaabadu u xidhnaayeen,islamaarkaana labada dhinac aanay wax war ah ka soo saarin.
Geesta kale, shir-jaraa’id oo ay Kaaliyaha Xoghayaha Arrimaha Dibadda ee Maraykanku ku qabatay Madaarka Egal International Airport ee Hargeysa oo ay sharrax kaga bixineysay ujeeddada booqashadeeda, ayaa waxa ay Jendayi Frazer ku tidhi; “Ujeeddada booqashadeydu waxay rogaal-celin u tahay booqashadii uu dhawaan ku yimid Washington Madaxweyne Daahir Rayaale, waxaanan wadi doonaa la shaqeynta Somaliland ee dhinacyada xasilloonida, nabadgalyada ka jirta Somaliland, ta gobolka iyo sidoo kale aqoonsiga dastuurka dimoqraadiga.”
Waxa ay intaa raacisay in Maraykanku taageerayo doorashooyinkii xorta ah ee hore uga dhacay Somaliland, iyadoo sheegtay inay sii wadi doonaan kaalmeynta doorashooyinka sannadkan la diyaarinayo, “Waxan halkan u joognaa waa mid astaan u ah saaxiibtinimo iyo wax-wada-qabsi,” ayey tidhi Jendayi Frazer.
Mar ay ka jawaabeysay mawqifkooda ku wajahan madaxbannaanida Somaliland waxay tidhi; “Marar badan oo hore ayaan sheegnay in aannu la shaqeyn doono Maamulka Somaliland annagoo ka duuleyna dimoqraadiyadda xooggan ee ka dhisantay halkan. Waxaannu aaminsanahay in arrinta aqoonsigu tahay mid u taal Midowga Afrika iyadoo aannu sii wadi doono in hoggaamiyayaasha AU-da aanu kala shaqeyno sidii ay u qaadan lahaayeen go’aankii lagu aqoonsan lahaa Somaliland laguna siin lahaa madaxbannaanideeda.”
Jendayi Frazer oo ka jawaabeysay sida uu dalka ugu dimoqraadiyadda weyn dunidu u gacan siinayo dalka ugu da’da yar dimoqraadiyadda Geeska ama Bariga Afrikaba waxa ay tidhi; “Waanu sii wadi doonaa in aannu taageerno Somaliland oo abuurtay rikoodh aad u fiican iyo sharaf wanaagsan.
Halkan waxaan u imi in aan kala xaajoodo maamulka sida Maraykanku u taageeri karo shacbiga.”
Ms. Jendayi Frazer oo uu socdaalkeeda ku wehelinayey weheliyo ergayga gaarka ee Maraykanka u qaabilsan arrimaha Somaliland iyo Soomaaliya Mr. John Yates waxay kulan ku yeesheen Madaxweyne Rayaale hoteelka Ambassador ee magaalada Hargeysa, halkaas Madaxweynuhu qado-sharaf ugu sameeyey Jendayi Frazer iyo wafdigeeda.
Kayse Axmed Digale
« Jendayi Frazer oo Galabta ka dhooftay Dalka Intaan ka xasuusto nabadayntii Ceerigaabo iyo beelaha Somaliland-Maxamed Siciid Gees. »